Tim Berners-Lee wuxuu xaraashaa lambarka asalka asalka ah ee www | Laga soo bilaabo Linux
Tim Berners-Lee (Saynisyahan reer Ingiriis ah oo saynisyahan ah oo ikhtiraacay Webka) xaraashayaa koodhka asalka asalka ah ee www oo ah calaamadda aan la jecleyn (NFT). Sidaa darteed, tani waxay noqon doontaa markii ugu horreysay ee aad go'aansato inaad ka faa'iideysato dhaqaale ahaan waxa loo arko inuu yahay mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee xilligan la soo saaray.
Marka lagu daro lambarka isha, Warqad ka timid Berners-Lee laftiisa ayaa sidoo kale la xaraashayaa, feyl feyl ah oo lagu daabici karo boodhadh, iyo 30 daqiiqo oo fiidiyoow ah oo muujinaya koodhka uu si toos ah u qoray Berners-Lee.
Kuwa aan aqoon u lahayn NFTyada, waa inay ogaadaan inay yihiin nooc ka mid ah hantida dijitaalka ah ee loogu talagalay in lagu muujiyo lahaanshaha qof ee shey dalwad gaar ah leh, sida sawirrada iyo fiidiyowyada internetka.
Intii ay joogeen in muddo ah, astaamo aan fungible ahayn (NFTs oo gaagaaban) waxay bilaabeen inay soo jiitaan horraantii bishii Maarso ee sanadkan. Tani waa kadib markii xaraashka Christie uu iibiyay farshaxan NFT ah (iskudhaf sawirro ah oo uu sameeyay farshaxanka dijitaalka ah ee Beeple) waxyar kadibna, wuxuu ahaa Jack Dorsey, oo ah madaxa Twitter, kaasoo iibiyay qoraalkiisii ​​ugu horreeyay $ 2.9 milyan.
Xaraashka Koodhka asalka ah ee shabakadda, oo cinwaan looga dhigay "Tani waxay bedeshay wax walba" waxay ka dhici doontaa London laga bilaabo Juun 23 ilaa 30, iyadoo xaraashku ka bilaabmayo $ 1,000. Waxaa maamuli doona Sotheby's, oo ah guri xaraashka dalal badan oo Ingiriis iyo Mareykan ah shaqooyinka farshaxanka iyo uruurinta. Sida laga soo xigtay Sotheby's, lacagta laga helo xaraashka ayaa ka faa'iideysan doonta dadaallada Berners-Lee iyo xaaskiisa ay taageeri doonaan.
NFT waxaa ku jira faylasha asalka ah ee shaabadaysan oo ay ku jiraan:
Diiwaanka asalka ah ee feylasha leh taariikhda iyo waqtiga ay kujiraan koodhka ilaha, oo la qoray inta udhaxeysa Oktoobar 3, 1990 iyo Agoosto 24, 1991. Faylashaan waxay kakooban yihiin koodhadh kudhowaad 9.555 khad ah, nuxurkooduna uu kamid yahay hirgalinta saddexda luuqadood ee la alifay iyo borotokollada. Sir Tim; HTML (Luqadda Calaamaynta Hypertext); HTTP iyo URI, iyo sidoo kale dukumiintiyada asalka ah ee HTML ee faray isticmaaleyaasha webka hore sida loo isticmaalo arjiga.
Muuqaalka sawir ee koodhka la qorayo (fiidiyoow, madow iyo caddaan, aamusnaan), oo soconaya 30 daqiiqo iyo 25 ilbidhiqsi.
Muuqaalka Muuqaalka Sawirka Sawirka ee Scalable Vector Graphics (SVG) ee lambarka oo dhameystiran (A0 841mm ballaaran oo 1189mm dheer), oo uu abuuray Sir Tim faylalka asalka ah ee adeegsanaya Python, oo leh garaaf garayn ah saxeexdiisa jireed ee dhinaca midig hoose
Warqad lagu qoray feylka README.md (qaab "calaamadeyn") ah oo uu qoray Sir Tim bishii Juun 2021, kana tarjumeysa koodhka iyo habka abuuritaankiisa.
Faylasha uu tixraacay NFT waxay kakooban yihiin koodhadh qiyaastii ah 9.555 khadadka, Sotheby's ayaa qeexaya
Tim Berners-Lee wuxuu ku qoray arjiga barnaamijka Objective C wuxuuna adeegsaday kombiyuutar NeXT si uu u sameeyo.
Waa sidaas waxaa jiri kara "si aan dhammaad lahayn" nuqulo badan oo walxaha dhijitaalka ah, laakiin mid keliya ayaa leh NFT keliya. Midab ahaantan gaarka ahi waxay ku siin kartaa sheyga qiimihiisa, sida shaabad caadi ah oo leh naadir khaldan.
Koodhka isha ee la xaraashayo ayaa hadda noqonaysa nuqulka keliya ee la saxeexay ee lambarka isha ee biraawsarka ugu horreeya adduunka. Dareenkaas, sheyga ayaa gebi ahaanba ah mid gaar ah. Tani waxay noqon doontaa markii ugu horreysay ee Berners-Lee uu dhaqaale ahaan uga faa'iideysto waxa loo arko inuu yahay mid ka mid ah waxyaabihii ugu waaweynaa xilligan.
"Soddon sano ka hor, waxaan abuuray wax, iyadoo la kaashanayo xigto wada-hawlgalayaal badan oo adduunka ah, inay ahayd aalad awood badan u leh aadanaha," ayuu Berners-Lee ku yiri hadal uu soo saaray. Aniga ahaan, waxa ugu fiican ee ku saabsan webka wuxuu ahaa ruuxda iskaashiga.
In kasta oo aanan saadaalin ka bixin mustaqbalka, waxaan si kal iyo laab ah u rajaynayaa in isticmaalkeeda, aqoonteeda iyo suurtagalnimadeeduba ay furan yihiin oo mid walba oo naga mid ahi heli karo si ay noo oggolaato inaan sii wadno hal-abuurnimada, abuurista iyo bilaabidda isbeddelka farsamada ee xigta, oo aynaan weli qiyaasi karin. «
“NFTyada, ha ahaadaan shuqullo farshaxan ama farshaxan dijitaal ah oo sidan oo kale ah, waa hal-abuurkii ugu dambeeyay ee lagu cayaaro adduunka adduunka iyo habka ugu habboon ee lahaanshaha halkaas ka jira. Tim Berners-Lee wuxuu rumeysan yahay in "tani ay tahay habka ugu habboon ee lagu buuxin karo asalka Webka." »Miyaad ku guuleysan doontaa xaraash rikoodh ah xaaladda hadda jirta ee burburka suuqa NFT?
Ugu dambeyntii, haddii aad xiiseyneyso inaad waxbadan ka ogaato, waad la tashan kartaa faahfaahinta Xiriirka soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Tim Berners-Lee wuxuu xaraashaa koodhka asalka asalka ah ee www
Amazon sidoo kale waxay ku biirtay xannibaadda FLoC